Dhugaatii alkoolii baay’isuun dhibee dhiibbaa dhiigaaf nama saaxila-qorannoo – Fana Broadcasting Corporate
Dhugaatii alkoolii baay’isuun dhibee dhiibbaa dhiigaaf nama saaxila-qorannoo
Finfinnee, Bitootessa 30, 2011(FBC)-Dhugaatii alkoolii baay’isuun carraa dhibee dhiibbaa dhiigaaf nama saaxiluu baal’aa qabaachuu qorannoon ogeeyyii Chaayinaa fi Biriitaaniyaan gaggeeffame tokko mul’iseera.
Kana bira darbees barteen guyyaa guyyaan alkoolii fayyadamuu ka’umsa dhibee kanaaf sababa akka ta’e qorannichaan irra gahameera.
Bu’aan qorannoo ogeeyyii Chaayinaa fi Biriitaniyaan lammiilee Chaayinaa kuma 500 irratti waggaa 10f gaggeeffame akka mul’isutti, namoota dhibee dhiibbaa dhiigaaf saaxilaman keessaa irraa caalaan isaanii sababa dhugaatii alkooliin ta’uu ibsameera.
Qoratoonni kunneen namoonni hamma fayyadama dhugaatii alkoolii hir’isuu akka qabanis ni gorsu.
Dhugaatii alkoolii baay’isuun dhibee dhiibbaa dhiigaa fi dhibeewwan biroo sababa dhugaatiin dhufaniif kan nama saaxilu ta’us, qorannoon tokko tokko garuu dhugaatii alkoolii muraasa fayyadamuun fayyaaf faayidaa akka qabu ni gorsu.
Bu’aaleen qorannoolee Yuunvaarsitii Osifoord, Yuunvaarsitii Piikiingii fi Saayinsii Meedikaalaa Akkaadaamii Chaayinaatti gaggeeffaman akka mul’isanitti;
Guyyaa guyyaan dhugaatii alkoolii si’a tokkoo hanga lamaa fudhachuun hamma dhibee dhibbaa dhiigaaf saaxilamuu %10-15 kan dabalu ta’uu irra gahameera.
Guyyaa guyyaan si’a afur dhugaatii alkoolii fudhachuun hamma dhibee dhiibbaa dhiigaaf saaxilamuu %35n akka dabalu irra gahameera.
Tamsa’ina dhibee sombaa hir’isuuf hundi ga’ee isaa ba’achuu…
Bara baajataa kanatti agoobarri miiliyoonni 6 ol ni raabsama
Hirriibaan walqabatee ilaalchoota dogongoraa sirreeffamuu qaban
Yaaliin talaallii kaansarii irratti godhamaa jiran abdii qabeessa ta’uu ibsameera